BURMA: Online News & Analysis: စာနယ်ဇင်းလောက နှင့် အ၀ါရောင် ဂျာနယ်လစ်ဇင်
Burmese Media and Yellow journalism
အ၀ါရောင် ဂျာနယ်လစ်ဇင် (Yellow Journalism) ဆိုသည်မှာ လူတကာအား ပေးလာစေရန်၊ သတင်းစာ ဆိုလျှင်လည်း မိမိသတင်းစာအား အ၀ယ်လိုက် လာစေရန် ပရိသတ်မျက်စိကျစေမည့် ခေါင်းကြီးပိုင်းများကို ဝေေ၀ဆာဆာဖော်ပြသော သတင်း ရေးသားသည့် စာနယ်ဇင်း တစ်မျိုးကို ခေါ်ပါသည်။ Yellow journalism ကျင့်သုံး သော သတင်းဌာနတစ်ခု (သို့မဟုတ်)၊ သတင်းစာ (သို့မဟုတ်) သတင်းထောက် များသည် မိမိတို့တင်ပြသည့် သတင်း အချက်အလက်များကို ချဲ့ကားပြီးပြော တတ်ကြသည်။ လူတစ် ဘက်သား ထိခိုက်နစ်နာအောင် သွားပုတ် လေလွင့် ပြောတာ လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ Professional သတင်း ပုံစံမဟုတ်ဘဲ မိမိ၏ ပုဂ္ဂလိက ခံစားချက်များကို အသားပေး၍ ရေးသားသော သတင်းဌာန (သို့မဟုတ်) သတင်း ထောက်သည် Yellow journalism ကို ကျင့်သုံး ခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် Yellow journalism ဆိုသည်မှာ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို တလွဲတချော်ရေးသားခြင်း၊ လိမ်လည် တင်ပြခြင်း၊ စာဖတ်သူများအား ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေခြင်း၊ ပုံကြီးချဲ့ရေးခြင်း၊ လူထောက်ခံလာအောင် ရေးသားခြင်း၊ လုပ်ကြံဖန်တီး ရေးသားခြင်း၊ စာဖတ်သူများစိတ်ဝင်စားလာစေရန် သံယဖြစ်ဖွယ်သတင်းများ၊ သာမန်သတင်းများကို အရေး ကြီးသယောင် ရေးသားခြင်းများ ကိုခေါ်သည်။
၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်ခန့်က New York Journal ကိုလည်း အထက်ဖော် ပြပါကဲ့သို့ သတင်းများကို တင်ပြခဲ့သဖြင့် Yellow journalism ဟူသော အသုံးအနှုန်း ကိုသုံးကာ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဆက်တည်း အနေနှင့် ယနေ့ ခေတ်တွင်လည်း သတင်းကျင့်ဝတ်၊ ကျင့်ထုံးနှင့် မညီသော၊ သတင်းစာများ၊ သတင်းသမားများကို နိုင်ငံရေးအရ ဘက်လိုက် ရေးသား (political bias) သော Yellow newspaper, Yellow news agencies နှင့် Yellow journalist များအဖြစ် အပြစ်တင်ကဲ့ရဲမှုများ ရှိလာသည်။ များသော အားဖြင့် Yellow journalism ကို ကျင့်သုံးသော သတင်းများသည် ဖြစ်ရပ် များအား လိုသည်ထက်ပိုပြီး လုပ်ကြံဖန်တီးရေး သားထားသော သတင်းများသာ ဖြစ် သည်။
၀ါရှင်တန် ဒီစီရှိ အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း (School of Communication, American University) မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ W. Josehp Campbell က ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Yellow journalism ဟူသော စာအုပ်ကို ရေးသားထုတ် ဝေခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်သည် သူ၏ ဒုတိယမြောက်ရေးသားသော စာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ Yellow journalism ကိုကျင့်သုံးသော သတင်းစာများနှင့် ပက်သက်၍ သတင်းစာမျက်နှာဖုံး များနှင့် ခေါင်းကြီးပိုင်းတို့တွင် ကော်လံများ လိုသည်ထက်ပိုခွဲကာ သတင်းခေါင်းစဉ်များကို ဝေေ၀ဆာဆာ ဖော်ပြသော သတင်းစာများ၊ ဥပမာ - အားကစား သတင်း၊ သူများ အတင်းအဖျင်း များကို စာလုံးကြီးများဖြင့် (ကာလာများဖြင့်) ဝေေ၀ဆာဆာ ဖော်ပြသော သတင်းစာများ၊ သတင်း အရင်းအမြစ် (News source) ကို တိတိကျကျ မဖော်ပြနိုင်သော သတင်းများနှင့် ကိုယ့်သတင်းဌာန၊ သတင်းစာစောင်ကို လူကြိုက်များလာစေရန် အရှက်မရှိ ပြောင်ပြောင် တင်းတင်း ရေးရဲ သော သတင်းစာ၊ သတင်းထောက်၊ သတင်းဌာနများသည် Yellow journalism ကို ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ရေးသား ထားသည်။
W. Joseph Campbell ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်များမှာ - Yellow Journalism: Puncturing the Myths, Defining Legacies, Spanish-American War : American Wars and the Media in Primary Documents, The Year That Defined American Journalism, The Emergent Independent Press in Benin and Cote d'Ivoire : From Voice of the State to Advocate of Democracy တို့ ဖြစ်သည်။
ဂျိုးဇက် ကမ်ပ်ဘဲလ် သည် အမေရိကန် တက္ကသိုလ်တွင် စတင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သော ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကတည်းကပင် စာအုပ်ပေါင်း လေးအုပ်ကို ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Campbell ၏မကြာသေးမီကမှ ထုတ်ဝေခဲ့သော The Year That Defined American Journalism: 1997 and the Clash of Paradigms (Routledge, 2006) ကို သတင်းစာပညာသင်တန်းတွင် သင်ရိုးစာအုပ် အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်သည် သတင်းစာပညာရေး နှင့် လူထုဆက်သွယ်ရေး အစည်းအရုံး (AEJMC) က ချီးမြှင့်သော Tankard Book Award, 2007 တွင် နောက်ဆုံး ဆန်ကာတင် အဆင့်အထိ ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဂျိုးဇက် ကမ်ပ်ဘဲလ် သည် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ကို လူထုဆက်သွယ် ရေး အထူးပြုဘာသာရပ်ဖြင့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။
Frank Luther Mott (1941) ကမူ Yellow journalism ကို အစိတ်အပိုင်း ငါးပိုင်းဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
၁။ သာမန် သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ ဖြစ်စေသည့် ခေါင်းစဉ်များတပ်ကာ ဖော်ပြခြင်း၊
၂။ သတင်းများတွင် ဓာတ်ပုံများကို ဗုံးပေါလအော သုံးခြင်း (သို့မဟုတ်) စိတ်ကူးယဉ် ပုံများဆွဲ၍ တင်ပြခြင်း၊
၃။ အင်တာဗျူး အတုအယောင် (faked interviews) များကို ဖော်ပြခြင်း၊ အောက်တွင်တင်ပြထားသော အကြောင်းအရာ နှင့် ပေးထားသော ခေါင်းစဉ် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း၊ သတင်း experts ဆိုသူများထံမှ အချို့ အမှားများကို သင်ယူပြီး လက်စွမ်းပြခြင်း၊
၄။ တနင်္ဂနွေ အထူးကဏ္ဍ ဟူသော ကာလာစုံ သတင်းကဏ္ဍကို အလေးပေးဖော်ပြခြင်း (များသောအားဖြင့် ဟာသကဏ္ဍ များတွင်ဖြစ်ပြီး၊ ယခုအခါ အမေရိကန်နိုင်ငံ သတင်းစာများတွင် ထိုကဏ္ဍကို သာမန်ကဏ္ဍ တစ်ခု အဖြစ် ဖော်ပြကြသည်။)
၅။ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို သနားစရာ ဇာတ်လမ်းပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် လုပ်ကြံဖန်တီးရေးသားခြင်း၊
Frank Luther Mott သည် အမေရိကန် သမိုင်းပညာရှင် နှင့် သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အိုင်အိုဝါ၊ အင်ဒီယာနိုလာရှိ ဆင်ပ်စွန် ကောလိပ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားခဲ့ပြီး အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ် (UI) ၏ သတင်းစာပညာ ဋ္ဌာနတွင် ဋ္ဌာနမှူးအဖြစ် အနှစ် (၂၀) ကြာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် မစ်ဆူရီ တက္ကသိုလ် (MU) ၏ သတင်းစာပညာကျောင်းတွင် ဋ္ဌာနမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
Photojournalism ဟူသော စကားလုံးအသစ်ကို ၁၉၂၄ ခုနှစ်တွင် တည်ထွင်ပြီးနောက်ပိုင်း၊ Mott ၏အရှိန်အ၀ှာသည် သတင်းဓာတ်ပုံပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလောတွင် လွှမ်းမိုး ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး သတင်းဓာတ်ပုံပညာသင်တန်းကို အိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ သူရေးသားခဲ့သည့် A History of American magazines စာအုပ်သည် ၁၉၃၉ ခုနှစ်က Pulitzer Prize for History ဆုချီးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ ထိုစာအုပ် စတုတ္ထတွဲသည်လည်း ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် Bancroft ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ထို့ပြင် သတင်းသမားတစ်ယောက် အနေဖြင့် သတင်းကို မျှမျှတတ ဖြစ်စေရန် မည်သို့ရေးသားသင့်သည်ကို The Indochina Media Memorial Foundation (IMMF) အတွက် Peter Eng နှင့် Jeff Hodson တို့ ရေးသား ပြုစုပြီး ထင်အောင်ကျော် ဘာသာပြန်ထားသည့် “သတင်းလိုက်ခြင်း နှင့် သတင်းရေးသားခြင်း အခြေခံလက်စွဲ” စာအုပ် စာမျက်နှာ ၃၂ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ “သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဘက်အမြင်တစ်ခုမက ရှိတယ်ဆိုတာ သတင်းထောက်တိုင်းသိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ သူတို့ သတင်းတွေ အတွက် သတင်းအရင်းအမြစ် အများကြီးဆီကနေ သတင်းရယူကြတာပေါ့။ ဒါမျိုးက အထူး သဖြင့် လူတွေရဲ့ အမြင်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူမှုရေးလိုကိစ္စမျိုးတွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ပွဲတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားဖြစ်ရပ် အကြောင်း တွေကို ရေးရတဲ့အခါ ပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်။
ကိစ္စတစ်ရပ်ကို ကိုယ့်သတင်းထဲမှာ ဘက်နှစ်ဖက်အမြင်ကို ထည့်ရေးထားတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ မျှတမှုရှိတယ်ပေါ့။ ကိုယ့်သတင်းက တစ်ဖက်ဖက်ကို ဘက်လိုက်တာမျိုးလည်း မရှိဘူးဆိုရင် ဒါဟာ ဘက်လိုက်မှုကင်းတယ်လို့ ဆိုရမယ်ပေါ့။
ဒီလိုဆိုလိုက်လို့ အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ် ဘက်နှစ်ဖက်ရဲ့ ပြောဆိုချက်နဲ့ အမြင်တွေကို ညီတူမျှတူ နေရာပေး ရေးသား ရမယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမြင်ကွဲပြားမှု အကြောင်းကိုတော့ ကိုယ်က ရည်ညွှန်းဖော်ပြရပါမယ်။ ရွေးကောက် ပွဲ၊ မဲဆွယ်ပွဲ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ အဓိက နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးရဲ့ အမြင်တွေ မပါဘူးဆိုရင် အဲဒီသတင်းက မျှတမှု ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။
တစ်ယောက်ယောက်အပေါ်မှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် စွပ်စွဲထားတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က အဲဒီလူဆီက တုံ့ပြန်ပြောဆိုချက်ကိုပါ ရအောင်ယူရပါမယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ကာကွယ်ခွင့်ကို ကိုယ်ကပေးရပါမယ်။
အစိုးရ၊ ဒါမှ မဟုတ် နိုင်ငံရေးပါတီများက ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သတင်းဌာနများဟာလည်း မျှမျှတတ သတင်းရေးသင့်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ ၀ါဒဖြန့်ချိနေတာတွေလို့ဘဲ စာဖတ်ပရိသတ်က ယူဆသွားလိမ့်မယ်။ သတင်းတွေမှာ ယုတ်စွအဆုံး၊ သတင်းရဲ့ အဆုံးမှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အမြင်ကွဲပြားမှုအကြောင်းအရာ တချို့ကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြပေးတယ်ဆိုရင် အဲဒီသတင်းတွေ ဟာ ပိုပြီးတော့ အားရှိပါမယ်”
အထက်ဖော်ပြပါ စာပိုဒ်ကိုကြည့်မည်ဆိုလျှင် သတင်းဋ္ဌာန၊ သတင်းသမား တစ်ယောက်၏ ကျင့်ဝတ် နှင့် သတင်းတစ်ပုဒ်၏ အင်္ဂါရပ်များကို ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ သတင်းဖတ်သူများကလည်း ထိုအချက်အလက်များအပေါ်ကို အခြေခံကာ ဝေဖန် သုံးသပ်သင့်သည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
Yellow Journalist, Yellow News agencies, Yellow Journal များမှာ ယနေ့ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာ အပါအ၀င် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ဗမာစာနယ်ဇင်းလောကတွင်လည်း ရှိပါသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံများမှ Yellow journalism အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့် ထုတ်ဝေနေသော သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များမှာ ပုံများဝေေ၀ဆာဆာဖော်ပြကာ အနီရောင် မျက်နှာဖုံးဖြင့် ထုတ်ဝေသော လူကြိုက်များသည့် British Journal၊ ထူးခြားထင်ရှားသည့် The Sun သတင်းစာ၊ သြစတေးလျ နိုင်ငံထုတ် The Daily Telegraph နှင့် ဂျာမန် “Springer” သတင်းစာတို့ ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းမှ Yellow journalism ကို ကျင့်သုံးသော စာနယ်ဇင်းများမှာ တစ်ဖက်သက် ၀ါဒဖြန့်ချိနေသော စစ်အစိုးရပိုင် မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံ နှင့် စစ်အစိုးရ အလိုကျရေးသားပေးနေသော ဂျာနယ်များအားလုံး ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ပတွင်မူ ရည်ရွယ်ချက်တူသော်လည်း မူဝါဒမတူညီရုံဖြင့် အချင်းချင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စော်ကားတိုက်ခိုက်နေသော သတင်းဋ္ဌာနများ၊ မိမိဝိတ် (အင်အား) နှင့် အရှိန်အ၀ှာကိုသုံး၍ တစ်ဖက်သား နစ်နာစေရန် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သည့် သတင်းဋ္ဌာနများ၊ စစ်အစိုးရ အား တိုက်ခိုက်ရလျှင်ပြီးရောသဘောဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်ကို အသားပေး၊ ဇောင်းတင်ပြီး ရေးသည့် သတင်းဋ္ဌာနများ ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းဋ္ဌာနများက အဆိုပါကဲ့သို့ သတင်းများအား ရေးသား ကြေငြာခဲ့သည်ရှိသော် ထိုသတင်းများမှာ အ၀ါရောင် သတင်းများ (Yellow news) သာဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ရေးသားလိုက်၍ မုန်းကြမည်ဆိုလျှင်လည်း အပြုံးမပျက်၊ အမုန်းခံပါမည်။ အပြုသဘောဖြင့် ဝေဖန်သည်သာဖြစ်ပါ သည်။ ငယ်စဉ်က ကျနော့် အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာပြောခဲ့ဖူးသော စကားတစ်ခွန်းကို ပြန်လည် မျှဝေချင်ပါသည်။ တစ်ရက်တွင် ဆရာက ထပ်ကာထပ်ကာ အသေအချာမှာပါလျှက်နှင့် အက်ဆေးတစ်ပုဒ်တွင် ရှစ်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက် မမှားသင့် သည့် အမှားမျိုးကို မှားကြသဖြင့် အတန်းထဲတွင် အဆူခံကြရပါသည်။ ဆရာက “အေး….ဘယ်သူတွေမှားတယ်ဆိုတာတော့ နာမည် တပ်ပြီးပြောမနေတော့ဘူး။ ငါမမှားဘဲ နဲ့ ငါ့ကိုပြောနေတာများလား မသိဘူးဆိုပြီးလည်း မှန်တဲ့သူတွေက မလုံမလဲ ဖြစ်မနေကြနဲ့။ မှားတဲ့ အထဲမှာ ငါ ပါနေရင် ငါ့ကိုပြောတယ်လို့မှတ်” ဟု ဆရာ ပြောခဲ့သည်ကို ပြန်ပြီး သတိရနေပါသည်။
ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း သတင်းထောက်စစ်စစ် တစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါ။ သို့သော် မိမိကိုယ်တိုင်သည် သတင်း ရင်းမြစ်များများ ရနိုင်သည့်နေရာတွင် ရှိနေခြင်း၊ သတင်းထောက် တစ်ယောက်ဖြစ်ရန် စိတ်ကူးမထားသော်လည်း မိမိသိရှိ နေသည့် သတင်းများကို မိမိသိရှိလိုက်သော အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ အများအားသိရှိစေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ပြန်လည်မျှဝေ လိုသော ဆန္ဒရှိခြင်း၊ စာရေးရသည်ကိုလည်း ၀ါသနာပါခြင်း စသည့်အခြေအနေများကြောင့် သတင်းများကို ရေးသားဖြစ် ပါသည်။ သို့သော် သတင်းထောက် တစ်ယောက် မဟုတ်သည့်တိုင်၊ သတင်းများကို အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေသည့် volunteer သတင်းသမား ဟုပြောလို့ရနိုင်သည့် စာရင်း ထဲတွင်ထည့်လျှင်တော့ ရချင်ရမည်။ ထို့ကြောင့် သတင်းရေးနည်းစာအုပ်များ၊ ဘာသာပြန် သတင်းသမားများလက်စွဲ စာအုပ်များ စသည့် ကိုယ်နှင့် လက်လှမ်းမီရာ စာအုပ်များကိုတော့ ဖတ်ဖြစ်ပါသည်။
စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ စာနယ်ဇင်းများ ဆိုသည်မှာလည်း တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှ ပါဝင်နေသည်ဟုဆိုလျှင်လည်းမမှားပါ။ အားလုံးက နည်းအမျိုးမျိုး နှင့် ပါဝင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြသည်သာ ဖြစ်သည်။ တိုက်ပွဲတွင်အဓိက အကျဆုံးမှာ ပြည်တွင်းရှိ အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပြည်သူလူထုသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများ၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကို ပြည်ပရှိ အတိုက်အခံသတင်းဋ္ဌာနများ၊ ဘလော့ဂါများ နှင့် အခြားတစ်နည်းနည်း ဖြင့် သတင်းဖြန့်ဝေပေးနေသူများက ပြည်တွင်းဖြစ်စဉ်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ မြန်မာပြည်သူလူထု အပါအ၀င်၊ နိုင်ငံတကာ က မြန်မာ့အရေးကို သိရှိပြီး၊ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန် လုပ်ပေးနေကြသည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသို့လုပ်ရင်းနှင့်ပင် အချို့သတင်းများမှာ အ၀ါရောင်အဆင့်သို့ ရောက်ရောက်သွားတတ်ကြသည်။
ကျနော် မှတ်မိနေသေးသည့် အ၀ါရောင် သတင်းများကို ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဆိုလျှင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်စက်တင်ဘာ အရေး အခင်းကာလက ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး ဆန္ဒပြသူ ကိုထင်ကျော် နှင့် သတင်းဋ္ဌာနတစ်ခုက ဆက်သွယ်မေး မြန်းထားသော သတင်းတစ်ပုဒ် (ထိုသတင်းတင်ပြပြီးနောက် ရက်အနည်းငယ်တွင် ကိုထင်ကျော် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်)၊ ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စတွင် လူအခွင့်အရေးရှုထောင့်မှ တင်ပြပြီး၊ စစ်အစိုးရကိုလည်း တိုက်ရင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများဘက်ကိုလည်း ဇောင်းပေးရေးသားရင်း၊ တိုင်းရင်းသား တစ်စုအား လူမျိုးရေးအရ ထိခိုက်စော်ကားသလို ဖြစ်သွားစေသည့် သတင်းတစ်ပုဒ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားစွဲခံရသောကိစ္စ နှင့် ပက်သက်၍ သတင်းဋ္ဌာန အချို့က သတင်းဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုအား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ စွပ်စွဲတိုက် ခိုက်ခဲ့သော သတင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေသူ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် သမီးဖြစ်သူ မ၀င်းမမ တို့အား အစေခံဟု သုံးစွဲပြီး ထိုသူတို့အား ထိခိုက်နစ်နာစေခဲ့သောသတင်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခု ကျန်ပါသေးသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဗိုလ်ချုပ် သန်းရွှေအား စာရေးသည့်ပုံစံဖြင့် ရေးထားသောစာကို သတင်းဋ္ဌာန တစ်ခုက ဖော်ပြပေးသော သရော်စာဖြစ်သည်။ ထိုသရော်စာမှာ သာမန်အခြေအနေတွင် ဆိုလျှင် ဖတ်၍ကောင်းပါမည်။ သရော်သည်၊ နောက်သည်၊ ပြောင်သည်ဆိုသည်မှာ အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါကို ကြည့်ရပါသည်။ ထိုသရော်စာကို ဖတ်ရသည်မှာ အသုဘအိမ်တွင်သွားပြီး ပြက်လုံးထုတ်နေသည်နှင့် တူပါသည်။ ယခုတော့ အဆိုပါ သတင်းများ၊ သရော်စာများသည် စစ်အစိုးရကို မဟုတ်ဘဲ အရေးခံရသော ကာယကံရှင်များကို ထိခိုက်နစ် နာစေခဲ့သော သတင်းများဖြစ်သဖြင့် အ၀ါရောင်အဆင့်ရှိ သတင်း (Yellow news) များ ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းများကြောင့် မြန်မာ့အရေးကို ပြည်ပသတင်းဋ္ဌာန များအား အားကိုးပြီး ဖတ်ရှုနေကြရသော ပြည်ပမှ မြန်မာများအကြား ထိုသတင်းများ တင်ပြခဲ့သည့် သတင်းဋ္ဌာနများ အပေါ် ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပရိသတ်ထံမှ “မျက်နှာမရ၊ လက်ဝါးရ” ဟူ သော စကား အတိုင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။
By extension the term is used today asapejorative to decry any journalism that treats news in an unprofessional or unethical fashion, such as systematic political bias. Yellow Journalism can also be the practice of over-dramatizing events.
ယခုခေတ်တွင် သတင်း နှင့် နည်းပညာ ကဏ္ဍသည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာသည်မျှ၊ ပြည်သူလူထု၏ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတသည်လည်း တိုးတက်လာကာ မျက်စိပွင့်၊ နားပွင့် ရှိနေကြပြီဖြစ်သည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ မြန်မာပြည်သူလူထုသည် သတင်း နှင့် နည်းပညာကျေးဇူးကြောင့် စစ်အစိုးရအတိုက်အခံ သတင်းဋ္ဌာနများမှ တင်ပြသော သတင်းများကိုပါ စိတ်ဝင်တစား ဖတ်ရှုနိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စစ်အစိုးရ၏ တစ်ဘက်စောင်းနင်းရေးသားသော ၀ါဒဖြန့်ချိရေး သတင်းများကိုသာ ဖတ်ရှုခဲ့ကြ၊ ယုံစားမိခဲ့ကြသည့်အတွက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြသည်ကိုလည်း ပြည်သူလူထုက ကောင်းကောင်း သိမြင်နားလည်နေကြပြီ။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် သတင်းတစ်ပုဒ်သည်၊ ဟုတ်၏၊ မဟုတ်၏၊ မှန်၏၊ မမှန်၏၊ ခိုင်လုံမှုရှိ၏၊ မရှိ၏ စသည်ကိုလည်း ကောင်းစွာရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်ကြသော ကာလသို့ရောက်နေပြီဆိုသည်ကို ကျနော် အပါအ၀င် သတင်းရေးသူများအားလုံး သိရှိကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ သတင်းတစ်ပုဒ်သည် မျှတမှု (Balance and fairness) နှင့် ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျမှု (Objectivity) ရှိရန်လိုအပ်ပေသည်။ ကိုယ်သည် နာမည်ကြီး ဘလော့ဂါ တစ်ယောက် (သို့မဟုတ်) သတင်းထောက် တစ်ယောက်ဖြစ်၍ (သို့မဟုတ်) ကိုယ့်သတင်းဋ္ဌာနသည် နာမည်ကြီး သတင်းဋ္ဌာန တစ်ခုဖြစ်၍ ကိုယ်ရေး သမျှ သတင်းတိုင်းကို ပြည်သူများ အမြဲစိတ်ဝင် စားနေမည်ဟု ပုံသေမမှတ်ယူသင့်ပါ။ ပြည်သူအားကိုးရသော သတင်းသမား (သို့) သတင်းထောက်တစ်ယောက်၊ ပြည်သူအားထားရသော သတင်းဋ္ဌာန တစ်ခုဖြစ်ရန် လိုပါသည်။
မည်သူမှ မမြဲတမ်းမမှားကြသလို၊ အမြဲတမ်းလည်း မမှန်နိုင်ပါ။ တစ်ခါတရံ သတင်းသမားတစ်ယောက် အနေနှင့် သတင်းရင်း မြစ်နောက်သို့ သဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရင်း မိမိ၏ သတင်းရင်းမြစ်မှာ မိမိကြောင့် ဓားစာခံဖြစ်သွား တတ်သည်။ မိမိသည် ထိုသတင်း အား တင်ပြနိုင်လျှင် အကျိုးအမြတ် မည်ရွှေ့မည်မျှ ရလိမ့်မည် ဖြစ်လင့်ကစား ထိုသတင်း ကြောင့် တစ်ဖက်သား နစ်နာသွား မည်ဆိုလျှင် ရေးဖို့ကို အတော်ကို ချင့်ချိန်ပြီး စဉ်းစားရပါမည်။ ထိုအချက်နှင့် ပက်သက်ပြီး IMMF မှ Peter Eng နှင့် Jeff Hosdon တို့က စာမျက်နှာ ၁၄၄ တွင် တင်ပြထားသည်မှာ “ကိုယ့်သတင်းရင်းမြစ်ကိုလေးစားပါ - ကိုယ်က ပြည်သူလူထု အပေါ်မှာသာ တာဝန်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်သတင်းရင်းမြစ်တွေပေါ်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - သတင်းရင်းမြစ် တစ်ယောက်က အခြေအနေတစ်ရပ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အသိမခံတဲ့ သတင်းတစ်ခုပေးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က သူ့နာမည်ကို မဖော် ပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိတည်ရပါမယ်။ အဲဒီသတင်းရင်းမြစ်ရဲ့ နာမည်ကို ကိုယ့်သတင်းထဲမှာ သော်လည်းကောင်း၊ အခြား တစ်နည်းနည်းနဲ့ သော်လည်းကောင်း ဖော်ပြတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။ ဖော်ပြမိတယ်ဆိုရင် အဲဒီ လူရဲ့ ဘ၀မှာ၊ ဒါမှဟုတ် အလုပ်မှာ ထိခိုက်နစ်နာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ရုံမက တစ်ခါတလေမှာ အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်တာမျိုး အထိတောင် ရှိနိုင်ပါ တယ်” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ကျနော် Aljazeera သတင်းဌာနတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး documentary ကို ဘာသာသွားပြန်ပေး စဉ်က အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို မျှဝေချင်ပါသည်။ ထိုနေ့သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ Aljazeera သတင်းထောက် Tony Birtley က ရန်ကုန်တွင် သူရိုက်ခဲ့သည့်သတင်းများထဲတွင် မြန်မာစကားပြောများလည်း ပါသဖြင့် ထိုစကားများကို အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ရန် သူ digitize လုပ်ထားသည့် အခွေကို ဖွင့်ပြသည်။ ထိုအခွေကို တည်းဖြတ်သောအခါ ဟာနာ ဆိုသော နယူးဇီလန်သူ တစ်ယောက်လည်းပါသည်။ ကျနော်က အခွေထဲမှ ဆန္ဒပြသူများ၏ ပြောစကားများကို word ပေါ်တွင် ချရေးသည်။ ထိုစကားများကို သတင်းထဲတွင် စာတမ်းထိုးသည့်အခါ အသုံးပြုခဲ့သည်။ အချို့နေရာများတွင် စာတမ်းအစား မြန်မာစကားပြောများနေရာတွင် အင်္ဂလိပ်အသံထပ်ကာ အသံသွင်းသည်။ ထိုစဉ်က ဆန္ဒပြသူများထဲမှ တိုနီ၏ ကင်မရာအရှေ့တွင် စကားပြောခဲ့သူအချို့၏ မျက်နှာများကို spot လုပ်ကြသည်။ ပြည်တွင်းမှ သတင်းရင်းမြစ်များ၏ လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းကို မလေးရှားစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီခွဲတွင် လွှင့်သောအခါ တိုနီအပါအ၀င် ကျနော် နှင့်အတူ ထိုသတင်းကိုတည်းဖြတ်ကြသည့် အဖြူကောင်တစ်ယောက် နှင့် ဟာနာ တို့ ကင်မရာ နောက်ကွယ်မှ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ကြသည်။ သတင်း တစ်နေရာအရောက်တွင် ကင်မရာအရှေ့တွင် စကားပြောနေသာ သံဃာတော်တစ်ပါး၏ မျက်နှာကို spot မခံဘဲ ဒီအတိုင်း လွှတ်ပေးလိုက်မိသဖြင့် ဟာနာ မှာ ထိုနေရာတွင်ပင် ထိုအမှား အတွက် ၀မ်းနည်းကာ အသံမထွက်ဘဲ ငိုနေတော့သည်။ ကျနော်က “အင်း…ငါတို့ တည်းဖြတ်ဖို့ အချိန်သိပ် မရလိုက်လို့ ဒီလိုဖြစ်သွားတာ၊ ဒီသတင်းကို နောက်တစ်နာရီမှာ second round ထပ်လွှင့်ရင် အခုလိုမဖြစ်အောင် ငါတို့ပြန်လုပ်ကြမယ်” ဟုဆိုကာ ကျနော်တို့ ထိုအခွေကို ပြန်ပြီး စေ့စေ့စပ်စပ်ပြန်ကြည့်ကြသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်မှ ကျနော် ရလိုက်သော သင်ခန်းစာမှာ ကမ္ဘာ့သတင်းဋ္ဌာန တစ်ခုအနေဖြင့် သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခု၏ လုံခြုံရေးကို မည်မျှ တန်ဖိုးထား သည်ဆိုတာပဲ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်အခေါက်များတွင် Aljazeera studio သို့ သွားသည့်အခါများတွင် ထိုကိစ္စကို ကျနော် ပိုအလေးပေးပြီး သတိထား၍ လုပ်ခဲ့သည်။
ယခု ကျနော်နေထိုင်သည့် နေရာမှ တစ်နာရီခန့် ကားမောင်းရသည့်နေရာတွင် ထန်းလမုဆိုသည့် ရွာရှိသည်။ ထိုရွာတွင် ထိုင်းငါးဖမ်း လှေပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးက မြန်မာ အလုပ်သမား ၁၀ ဦးကို ပင်လယ်ထဲရှိ ငါးဖမ်းစက်လှေတွင် တစ်နှစ် ခန့်ခိုင်းပြီးသော် လုပ်အားခ မပေးဘဲ ထန်းလမုရွာတွင် လာပြီး ပစ်ထားခဲ့သည်။ ထိုအလုပ်သမားများမှာ ထိုကိစ္စကို လုပ်ခ မရသည့် အမှုဖြင့် တရားစွဲချင် သည်။ ငါးဖမ်းစက်လှေပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးနှင့် ထန်းလမုရွာလူကြီးမှာ ရင်းနှီးကြသည်။ ထန်းလမု ရွာရှိ ရွာလူကြီးကိုယ်တိုင်က လူမိုက်ဂိုဏ်းများနှင့် ပက်သက်မှုများရှိနေသည်။ ထိုကိစ္စသည် big issue ဖြစ်၍ တင်ပြပုံ ကောင်းကောင်း၊ အရေးအသားကောင်းကောင်း ဖြင့်ရေးလျှင် သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်မည်မှာ သေချာသည်။ ထိုသတင်း ကြောင့် ကိုယ့်နာမည် ကြီးလျှင်လည်း ကြီးသွားမည်။ သို့သော် သတင်းအရင်း အမြစ်များရှိသည့် နေရာသည် သူတို့အဖို့ အန္တရာယ်များသကဲ့သို့၊ ကိုယ်သွားလျှင်လည်း ကိုယ့်လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ ပထမတုန်း ကတော့ ထိုသူများကို ကားဖြင့် ကိုယ့်နေရာသို့ခေါ်လာပြီး အင်တာဗျူးမည်ဟု စဉ်းစားသည်။ ဒါကလည်း မဖြစ်နိုင်။ ထိုကိစ္စက သတင်းတက်သွားလျှင် အဆိုပါ အလုပ်သမားများမှာ ကြားထဲက ဓားစာခံဖြစ်သွားနိုင်သည်။ သူတို့ လုံခြုံရေးကိုလည်း ကြည့်ရမည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသတင်းကို ရေးဖို့ ခဏလေးမှေးထားရသည်။ သို့သော် ကိုယ်တင်ပြရမည့်သတင်းက update မဖြစ်လျှင်လည်း ပုပ်သွားတတ်သည်။
စာနယ်ဇင်းပညာရပ်က တစ်ကယ်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါသည်။ သတင်းသမားတစ်ယောက်က သတင်းရင်းမြစ် ရှိတဲ့နေရာကို သွားရသည့်အတွက် အချို့နေရာတွေမှာ စွန့်စားပြီး၊ သွားရတာမျိုး ရှိသလို၊ အချို့နေရာများကျပြန်တော့လည်း ပျော်စရာကောင်းပြီး ကိုယ့်အတွက် ဒေသန္တရ ဗဟုသုတတွေ ရတာလည်းရှိသည်။ ကျနော့်အမြင်ပြောရလျှင် သတင်းသမား တစ်ယောက်တွင် အနည်းဆုံး စပ်စုလိုစိတ် (inquisitiveness)၊ ကြံရည်ဖန်ရည် (sourcefulness) နှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်း (imagination) တော့ ရှိဖို့လိုမည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ထို့ပြင် မိမိလုံခြုံရေး နှင့် မိမိသတင်းရင်းမြစ်၏ လုံခြုံရေးကိုပါ ဂရုစိုက်ရမည်။ နောက်ပြီး ကိုယ်က သတင်းသမားတစ်ယောက်၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် ညီအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်မှသာ မိမိ၏သတင်း ဋ္ဌာနလည်း ဂုဏ်တက်မည်။ သို့မဟုတ်ပါက မိမိကိုယ်၌က အ၀ါရောင် သတင်းသမား (Yellow Journalist) ဖြစ်နေလျှင်၊ မိမိကြောင့် မိမိ သတင်းဋ္ဌာနသည်လည်း အ၀ါရောင် သတင်းဋ္ဌာန ဖြစ်နေမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ စာနယ်ဇင်းလောက တိုးတက်စေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အပြုသဘောဆောင်ကာ ရေးသားလိုက်ပါသည်။
Yellow Journalism by W, Joseph Campbell (2001)
သတင်းလိုက်ခြင်း နှင့် သတင်းရေးသားခြင်း အခြေခံလက်စွဲ (ဘာသာပြန် - ထင်အောင်ကျော်)
သတင်းစာပညာ သဘောတရား နှင့် လက်တွေ့ (မောင်ဝံသ)